SomaliTalk.com » 2010 » March » 27
Home » Archive Maalinta March 27th, 2010
SAYID QUTUB ! : MA SHIIKHBAA MISE MUFAKIR ISLAAMI ?!
HORUDHAC : SAYID QUTUB waa shakhsiyad aad la iskugu khilaafsan yahay se la isku raacsan yahay in uu Caan ka yahay Dunidda Islaamka iyo Adduunka oo dhanba. Waxaan ku dadaali doonaa in wada koobo arrimaha la qabo oo dhanba anigoo cadaalad falaaya isla markaasna dadka ku xadgudbayna sheegaaya kuwa xaqiisa yareystana sheegaaya, isla markaasna saari doona insh-alaah miisaan Islaami ah . Waxaana soo qaadan...
Ururka ardayda soomaaliyeed ee Kuwait oo Koobka kubada cagta iyo Koleyga soo gabagabeeyay, safiirka somalidana uu gudoonsiiyay koobkii kooxda guulaysatay.
Ururka ardayda soomaaliyeed ee Kuwait ayaa soo gabagabeeyay koobabka kubada cagta iyo kubada volleyball-sha oo ukala socday cayaartoyda soomaaliyeed ee kunool wadanka Kuwait. Halkan ka daawo sawiro dheeraad ah Waxaa mudo bil kudhawaad ah socotay koobkii sanadlaha ahaa ee ay qaban jireen urruka ardayda soomaaliyeed ee Kuwait. Koobkaas oo ay kasoo qayb galeen in kabadan 16 kooxood oo kala duwan kana...
Guddoomiyihii Degmada Xamar Jajab oo ku geeriyooday Qarax miino oo loo dhigay
Iyadoo dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyey xaafada Afisyooni ka jirtay xaalad aad u adag kadib markii boqolaal qoys oo dad barakacayaal ah uu Maamulka Gobolka Banaadir ku amray in ay ka guuraan xaafaddaasi. Dadka oo halkaasi ka sameystay guryo cooshado ah oo iyo Jiingado ayaa waxay sheegeen in ay halkaasi ay u yimaadeen in ay ka nabad galaan madaafiicda iyo dagaalada ka socda Magaalada Muqdisho,...